Kufamba uye Kuvaraidza Franchises yekutengesa | Mukana weFrancise | Franchiseek
Kufamba uye Kutandara Franchises
Franchiseek»Mukana weFrancise»United Kingdom»Kufamba uye Kutandara Franchises
Inoratidzwa Kufamba uye Kutandara Franchises
Kwekupedzisira Kufamba uye Kutandara Franchises
Kufamba & Kutandara Franchises
Nenzvimbo yekufambira inokura nekukurumidza pasirese, nekushanya ichibatsira hupfumi kuti hubudirire, wadii kuisa mari munzendo yekufamba uye yekuzorora? Ndicho chikonzero nei nhasi isu tichizonyora mamwe manhamba akapoterera kune yekufambisa & nzvimbo yekuzorora kuti ipe chero munhu anofunga zvekudyara njere diki mune iyo iri kukura nekukurumidza chikamu.
Statistics kutenderedza Yekufamba & Yekutandara indasitiri
Iye zvino isu ticha nyora zvimwe zvitambi zvakatenderedza pakufamba & nzvimbo yekuzorora. Saka chero munhu anotarisa kuisa mari anogona kuwana zvachose kunzwa yeiyo mhando yevatengi base yavanogona kuwana pamusoro payo kuisa mari kune imwe yeiyi inonakidza franchise mikana. Mamwe eaya manhamba anogona kukushamisa iwe kuti yakakura sei nzvimbo yekufamba & yekuzorora yakakura sei uye yakawanda sei inobatsira hupfumi hwedu gore rega.
Kubva 2010 indasitiri yekushanya yave iri iyo inokurumidza kukura chikamu.
Britain ine fungidziro yekuve neindasitiri yekushanya yakakosha madhora zviuru makumi maviri nemashanu emamirioni muna 257.
Pasi rose, 1.8bn vashanyi vanosvika muna 2018
4.5bn yepasirese yekufambisa yepasi rose muna 2018.
Inbound Tourism inochengeterwa kukura kubva pamadhora makumi maviri nemakumi maviri emadhora muna 21 kusvika pamakumi mashanu nemakumi mashanu emadhora na2013.
Iyo indasitiri yekushanya inopa mamirioni emabasa pasi rese.
Aya manhamba anoratidzei iyo indasitiri yekufamba & Yekutandara?
Iyi manhamba inoratidza kuti yekufamba & yekuzorora chikamu chiri kukura gore rega uye aya manhamba anoratidza zvakare mhando yevatengi base uye kushandisa kwaunowana unoshamisa zvechokwadi. Zvakare nzvimbo yekufambisa & yekuzorora yakanakisa pakubatsira vanhuwo veboka rekushanda vanopa mamirioni emikana yekushanda gore rega rega pasirese. Saka tinotarisira kuti zviverenge izvi zvakakurudzira kuti utange kuve kwako kufamba & nzvimbo yekuzorora uye uve sahwira wako.
Tsvaga yako yakakodzera yekufambisa franchise paFrancisee.